သမ်းဂေါင်ထပ် ည့ဉ်မနက် NLD အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » သမ်းဂေါင်ထပ် ည့ဉ်မနက် NLD အတွက်
သမ်းဂေါင်ထပ် ည့ဉ်မနက် NLD အတွက်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 26, 2015 in Opinions & Discussion | 14 comments
မဲခိုးလွှတ်တော်မှာတင်တဲ့ ခြေဥပြင်ရေး အန်အယ်လ်ဒီ ကြိုးဗန်းချက် လုံလောက်တဲ့မဲ မရလို့ ရှုံးနိမ့်သွားဂျောင်း သတင်းဖတ်ရတယ်။ ဘွားဒေါ်ဂျီးအဖို့ အရှုံးပေါင်းများစွာထဲက နောက်ထပ်အရှုံးတခု… ရှုံးပါများတော့ လည်း အရေထူနေလောက်ပါပီ။ ပုံစံတကျသွားနေတဲ့ စနစ်၊ နိုင်မှာဆိုလျင်တော့ရှုံးနိမ့်မှုအတွက် ခေါင်းဆောင်လှုပ်သူ နှုတ်ထွက်ပေးရတယ်။ ဘွားဒေါ်ဂျီးနေရာ အစားလဲသင့်ပြီ….
သို့သော်အန်အယ်လ်ဒီမှာ လူစားထိုး မရှိ၊ ထောက်ခံသူများကလည်း အဆင်သင့် မဖြစ်သေး…။ သူမှဒဗါး အခြားမရှိပြီ… ဒီတော့ဒီဇက်လန်းကို ဒီပုံနဲ့ ဒီလူဒွေပဲ ဒီရေတော ဒိုက်ပုံမျောသလို ဆက်ဒိုးကြတာပေါ့ စ်။
နောက်စပ်တွဲ အနေနဲ့… ရွေးဂေါက်ပွဲဝံဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်မလား.. ဒါလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို မှဒဗါး အခြား မရှိပြီ…။ တကယ်လည်း အခြားနည်းလည်း ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် လှုပ်တတ်ဟန်မတူ… ဒီတော့ မချိသွားဖြဲပီး ဝံပါလိုက်အူးမည်။
ရွေးဂေါက်ပွဲ နိုင်မလား… ။ အန်အယ်လ်ဒီ အပြတ်အနိုင်မရ.. နေရာခွဲယူရလိမ့်မည်ဆိုဒဲ့ နိုင်ငံရေးပေါဟိတ်အမျိုးစုံအိ ဟောကိန်းများဂျားဒဲ.. အနော်ရဲရဲတောက် ဦးကြောင်ကြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ပေါပါမည်… ၁၉၉၀ ရလာဘ်လိုပဲ အန်အယ်လ်ဒီ အပြတ်အသတ် နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ညွှန်ပေါင်းအော်နေ မျှော်နေတာ အန်ဒီအက်ဖ်လို ဇက်ပြတ် ပါတီတွေနဲ့ ဖွတ်နဲ့ တစညလို အနာဂါတ်မဲ့ ပါတွေတွေပါ။ (တခု ထောက်ထားမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲ ဖြစ်ရမည်၊ ညစ်လျင်လဲ ညစ်တဲ့နေရာတွေမှာ အန်အယ်လ်ဒီ နိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများ ထွက်ပေါ်လာလျင် နိုင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။)
ဘယ်အချိန် ဘယ်သူနိုင်မည် ထင်ထင်ရှားရှား သိရမည်လဲ…။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှ ပြတ်ပြတ်သားသား သိပါမည်..။ (ပြောပီးသားနော်လိင်လည်း ပြည်သူကတော့ ကိုယ့်နယ်မြေမှာ နိုင်သူအစစ်ကို သိမည်။)
ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတာလား.. မဟုတ်ပါ။ နာဂစ် ခြေဥနဲ့ အဓမ္မပြဌာန်းတဲ့ အရာမှန်သမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လက်မခံပါ။ သို့သော်အန်အယ်လ်ဒီလို ခေါင်းဝံပီးနေဒဲ့ ပါတီအဖို့ ကိုယ်ဝံတိုးဖို့သာ ကြံအိ။ ကိုယ့်ဖို့ကိုယ်သာ ကြည့်လွန်းတဲ့ အမေစုခြစ်သူတွေနဲ့ ကြောက်တတ်လွန်းတဲ့ လူထုကိုလည်း ဒါထက်ပို ခိုင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်..။ (ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ရွာထဲက ခိုနီဒုံ၊ ခိုပြာမား၊ လှော်ဗီမြ၊ တဖက်ပိတ်မဲသွပ်၊ ခြိမ်းပဒီး၊ foxပျံဂျီးနဲ့ ဗိုဂဒေါ်သာဂူးတို့ကိုပဲ နှာမူနာကြည့်..)
အာဏှာလွှဲမလား… အန်အယ်လ်ဒီ တကယ်နိုင်မှ အူးသမ်းရွှေဂျီး အကွက်စရွှေ့ပါလိပ်မည်။ လောလောဆယ် ရွှေ့နေတဲ့အကွက်တွေက အလဂါး အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ကစားဂွက် မဟုတ်.. ခလေးတောင် လှုပ်တပ်သည်။ အန်အယ်လ်ဒီ အနေနဲ့ လာဘ်ဆုပ်လာဘ်ကိုင်ရှိတဲ့ အသာဇီးရမှု မပြနိုင်သ၍ စစ်တပ်နှင့် ညှိဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲဒီအချိန်ကြ ပြသနာ ပြေလည်မလား.. ဝေးပါသေးအိ။ အဲဒီအခါ ဒီလိုပဲ ဘွားဒေါ် ငါတဂေါ ဆက်ဂေါပါအူးမည်။။
ဒါကြောင့် ရန်သူကို မယဉ်စိုင်ဂင် သူ့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်းလျှာကြ…။ တျောက်ထဲ လွှတ်ထားလျင် မြန်တျန့် ဒီမိုကရေစီအရေး စက်ရေစုန် မျှောပါလိပ်အူးမြည်…
ကြောင်ဇုတ် ကြောင်ဏှာကို ကြောင်ရာသွင်းပြီးမန့်ရရင်…
အခု ခြေ/ဥပါ ပြဌာန်းချက် တချို့ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အဆိုတင်တာ ဖွတ်ပါတီကပါ…
အဲသည့်တော့ ထောက်ခံမဲရတာမဆန်း… ဒါပါသည့် ကိုယ့်ခြေမန်းကွင်းနဲ့ကိုယ် မိသွားတာက…
တပ်ချုပ်ရဲ့အသံ တစ်မတ်သား Bone Head တွေ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖြစ်သွားတယ်…
ဘွားတော်အတွက် ရန်/ငါပြတ်ပြီး တိုးသာဆုတ်သာ ရှိသွားတယ်…
“ခြောက်ပွင့်ဆိုင်” ကို မျှော်လင့်ချက် မထားတော့တာမျိုးပေါ့ …
ရွေးဂေါက်ပွဲလား… ထပ်ပြောမယ် ၁၉၉၀ ကလို တောင်ပြိုကမ်းပြို ဒီချုပ်မနိုင်ပါ…
ကံမကောင်းရင် တပ်ချုပ် မအလ တောင် သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်… ဒါဗြဲ
. ဘောပွဲ လို ရှုံးတာ ကို အနိုင်လို့ မပြောပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ နိုင်တဲ့သူ ဘက် က အရှုံး ကြီး ကို အားမရလွန်းလို့ပါ။
. ဒီလို အချိန် ဗိုလ်အောင်ဒင် ရဲ့ လူကြမ်း ဘဝ နေပြီး ပိတ်သတ် သနားအောင် အခွင့်ယူနိုင်လိုက်ရင်
ကိုကိုချစ် ခမျာ မင်းသား ကနေ လူကြမ်း အဖြစ်ရောက်တော့မှာ။
မဘသ များ ကလဲ ဘေးတီးထားပြီး။
ဒါကို တောင် အကွက် မမြင်နိုင်ရှာတဲ့ ဒီ လူ တွေ ရဲ့ ခေါင်းထဲ ကိုယ့်ဘို့ ကလွဲ လို့ ဘာမှ မရှိတာ ပိုပြီး မြင်သာသွားတာ။
ဝင်း-ဝင်း လမ်း ကို ဘာလို့ များမရွေး နိုင်လဲ ဆိုတာ အခုတော့ မအံ့ဩတော့ဘူး။
မနေ့ကထိ တော့ မျှော်လင့်ခဲ့ သေးတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကတော့ အမှန်ပြောရရင် ကပေါက်ကြီး ပြောသလို မြန်မာပြည်ထဲက လူ တွေ သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေတယ်မထင်။
ကျွန်မ တို့ သာ အပြင်ကနေပြီး အတော် စိတ်ဝင်စားနေတာ။
အခြေအနေကြည့်ရတာလဲ ပါတီ ထက် လူ ကို ပိုစိတ်ဝင်စား ဖို့ များတာမို့ NLD က လူ ကောင်းကောင်း တွေ ဘယ်လောက် သွင်းနိုင်လဲ ပေါ်မူတည်မယ်။
အဲဒါကို မှ မလုပ်နိုင်ရင် ကျောက်စ် ဟောသလို NLD အတွက် မဲ အော ရဖို့ မရှိ။
သမ္မတ ကတော့ “ဦးခင်အောင်မြင့်”ကို ထိုးပေးနိုင်တယ် ပြောနေကြတာဘဲ။
. NLD အပြတ် နိုင်ဖို့ လူကောင်း ဘယ်လောက် စု နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကတော့
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာလဲ တာဝန်ရှိသလို
သူ က လက်ကမ်းပေးရင် အလယ်က စကားဝဲ နေသော သူများ ကရော ပြန်လှမ်းမလား ဆိုတာ ပေါ်တည်ပါမယ်။
အခုချိန်ဟာ အရေးကြီးဆုံးက ပြည်သူချစ်နိုင်တဲ့ လူကောင်းများများ ရွေးဖို့ပါဘဲ။
ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် စိတ်အဝင်စားဆုံး အပိုင်းက ဒီ နေရာမှာပါ၊ သမ္မတ ထက် ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
NLD မှာ လူကောင်း တွေ မပါနိုင်ရင် မဲ တွေ ပြန့်ဖို့ များတယ်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလ အရွေးခံ မဲ့ သူတွေ များမလားဘဲ။
အဲဒီ လူ တွေ က တကယ်ဘဲ ပြည်သူအတွက် ဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်။ ဒီလို လူကောင်း များများ လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ဖို့ လိုတာပါ။
သို့ပေမဲ့ ငါစွဲ များပြီး မစည်းလုံးနိုင်ရင်တော့ အကွဲ အပြဲ အငြင်းအခုန် တွေကြား အစမ်းသပ်ခံ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ဒုံရင်း ဖြစ်မှာလဲ စိုးရ။
ဒီလို ဖြစ်လာရင်တော့ ပူးပေါင်းပြီး ဝင်း-ဝင်း ဆိုတာ ကို မရွေးတတ် တဲ့ မြန်မာများ ရဲ့ ဗီဇ Gene ကို သာ အပြစ်ဖို့ ရင်း ဝေးဝေးကသာ လွမ်းပါတော့မယ်။
ဖွဘုတ်မှာ ကယွဲစီနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာလေး စာလုံးအထားအသိုပြင်ထားတာပါ…
မြန်တျန့်တွေက ၂ ယောက်ရှိရင် ၃ ပါတီကွဲကြတာမို့ မဆန်းပါဘူး ။ တပ်ထဲမှာလည်း အခုမှမဟုတ် အရင်ထဲက တယောက်နဲ့တယောက်မတည့် ၊ တဇောင်းစေးနဲ့မျက်ချေးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးပါ ။ ဒါပေမည့် ဘယ်တော့မှ လူသိရှင်ကြားထမပေါက်ဘူး ၊ ၂-ကောင်လုံး အဆော်ခံရမှာလေ ။ အဲသည့်လိုပဲ အစိုးရထဲမှာ ထင်သာ မြင်သာ ၃-ဖွဲ့ ၊ ဖွတ်ပါတီမှာ ၄-ဖွဲ့ ၊ အစိုးရနဲ့ ဖွတ်ပါတီနဲ့လည်း မတည့် ၊ တပ်နဲ့အစိုးရတော့ တည့်သလိုလိုရှိ ဆိုပေမည့် ၊ သူတို့အားလုံးက “အရပ်သား” အတိုက်အခံပေါ်မှာ တစ်သဘောထဲပဲရှိတယ် …
“ဘယ်တော့မှ အရပ်သားငဖြော် ဒို့ကို လူပါးဝတာလက်မခံ” တဲ့…
အတွင်းစည်းက မြင်နေရတာတော့ ဦးခင်အောင်မြင့်မဟုတ်ဘူး အရီး ၊ တပ်ချုပ် မအလပဲ ။ အောက်ခြေကိုစည်းရုံးတယ် ၊ ဆရာဟောင်းသမားဟောင်းတွေကို တကူးတက ဂါတယ် ၊ လူလုံး မကြာမကြာပြတယ် ။ အာဏာနီတည်ဆောက်နေတယ်လို့ပဲ မြင်တယ် ။ သူက ပင်စင်လည်းသွားတော့မှာ (သူ့ဆန္နရှိရင်) ဆိုတော့ သူ့အတွက်သူ အကွက်ဖော်နေတယ်လို့ပဲ ကောက်ချက်ချရမယ် ။ လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အတော်များများက သူ့ကို အမြင်ကြည်တယ် (သူတို့အပေါ်သိပ်ပြီး မောက်မောက်မာမာ မနေလို့) ။ ဖွတ်တွေကလည်း ပြစ်ချက်ရှိတဲ့ ရွှေမန်းကိုတင်မည့်အစား မအလကို တင်ပေးဖို့ ပိုပြီးစိတ်သန်ကြတယ် လို့သိရတယ် ။
ဆိုတော့… စစ်စွဲကြီးနေသရွေ့ ဒီမိုကရေစီအစစ်နဲ့ အလှမ်းဝေးဦးမှာပါ…
ဒီလို သာ စစ်တပ် ရဲ့ ဗိုလ်ကျတာ တွေ ဆက်ရှိနေတာ ပေါ်လွင်လာရင်မြန်မာပြည် ထဲ ဝင်လာမဲ့ ခြေလှမ်း တွေ ရပ်သွားမယ်။
အကူအညီ တွေ ဆုတ် သွားမယ်။
အဘ တို့ ဂရုစိုက် မယ် ထင်သလား ကွယ်ရို့။
. ဘားမီးစ်နည်း၊ ဘားမီးစ်ဟန် ဒီမိုကရေစီ ကြီး နဲ့ “ဘယ် ပြည်ပ မှ ဆောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ကွ” လို့ ပြောရင်း တံခါး တွေ ပြန်ပိတ်သွားဦးလေမလားဘဲ။
ဒီတစ်ခါ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ် ရမှာ က ခြံစည်းရုံး ခွ ထိုင် နေကြသော စကားဝဲ နေသူ အလယ်က လူကြီးမင်းများ။
ဘယ်လမ်း ကို လိုက်ကြမှာလဲ။
သူတို့ အများ ရဲ့ ရပ်တည် ဆုံးဖြတ်ချက် က မြန်မာပြည် ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘဲ။
. ကြားနေ ဆိုတာ မတရားမှု အတွက် ရပ်တည်ပေးလိုက်ခြင်းပါဘဲ။
ဆေး မှီ ပါစေ အသံဝဲ သူ များ ရှင့်။
အားကိုးရမယ့် ဒုတိယတန်း ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်မတုန်း လို့ ၊
ထမီထုတ် ကူဆွဲပေးရုံနဲ့တော့ အမတ် တက်မလုပ်ပါနဲ့ ၊
နောင် လက်လွှဲရလောက်တဲ့သူတွေ ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရသေး ၊
လက်ဟောင်းလူကြီးတွေက ခြေစွမ်းကျချိန်မှ လက်ပူတိုက်လူရွေးရမယ့်ဘဝ ၊
ဟိုဘက်ကလည်း ညစ်နည်းပေါင်းစုံ လာဦးမယ် ၊
မဲနိူင်လောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ ရှိသေးတယ် ၊
သူတို့နဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ ၊ သူနိူင်လောက်တဲ့နယ် ကိုယ်မဝင်နဲ့ ၊
လွှတ်တော်ထဲမှာ သူတို့မဲ ဟာ ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်လာမှာ ၊
၉၀ တုန်းက ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့နဲ့ တွဲခဲ့သလိုပေါ့ ၊
ပြီးတော့ နယ်တွေမှာ ဒေသခံကြိုက်သူကိုပယ်ပြီး
ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ အပေါ်ကချပေးတာမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရပါမယ် ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၅ ဟာ ၂၀၁၂ ထက် နည်းနည်းသာလာမယ်ဆိုရင်
၂၀၂၀ဟာ ပို အမြင်တင့်လာပါလိမ့်မယ် ၊
ဒေါ်စုဆက်ရှိနေရင်.. အားကိုးရတဲ့အမတ်တွေအဖြစ်.. နိုင်ငံခြားကနေသင်ယူလို့ရပါတယ်..။
တလောကတင်.. ယူအက်စ်ကို အမတ်တွေတအုပ်ကြီးလာပြီး.. လေ့လာသင်ယူသွားကြသေးတယ်..။
ပြည်ပအကြံပေးခေါ်ခန့်လို့ရတယ်လေ…။ ယူအက်စ်ကယူမလား.. ဥရောပကယူမလား.. စိန့်ပြည်ကယူမလား.. အိန္ဒိယ..ဂျပန်ကယူမလားပဲ..။
ဒေါ်စုသာဆို.. တလ ဒေါ်လှ၁သိန်းစားပါမောက္ခတွေ… နိုင်ငံရေးသမားတွေအလကားတောင်လာလုပ်ပေးလိမ့်..။
၀န်ကြီးဌာနတွေကျ.. တပ်ကလူတွေပဲ.. အများစုဆက်ရှိနေရမှာပါ..။
အဲဒီမှာလည်း.. မသိမတတ်တာတွေအတွက်.. နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လွှတ်(ရ)ပါလိမ့်မယ်..။
လူပုံအလယ်မှာတင့်တယ်ပြီး တော်တည့်မှန်ကန်တာကို ရနိုင်ပါလျှက်နဲ့ မယူပြီးဆိုရင်…..
ရှေးကုသိုလ်နည်းခဲ့လို့ ၀တ်နိုင်စားနိုင်ပါလျှက်နဲ့ မ၀တ်မစားပဲ ခပ်နွမ်းနွမ်းနေတာ ကပ်စေးနဲ့ခြစ်ကုတ်ပြီး မစားမသောက်ပဲ နေသလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ကိုယ်အားကိုးနေသူ က မပါတော့ ဘူးလို့ လုပ်မှာကို ပိုစိုးရိမ်ပါတယ်
ကြောင်နာကြီးကို အသေသတ် !!!
မဲပေးခွင့်ရှိသူ စာရင်းတွေ မှားနေတာကတော့ အင်မတိအင်မတန်ကို အရုပ်ဆိုး(အယုတ်ဆိုး)လွန်းပါတယ်
စာစီစာရိုက် မတော်တဆအမှားမဟုတ်တော့ဘဲ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ မှားထားတာလို့ကို ပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
အိုက်ကိစ္စ အိုက် ပြဿနာက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ NLD ရဲ့ ရလဒ်ကို
စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါ.. အသာစီးရနေမှုကိုတဆင့်စီလျှော့ချနိုင်တာ.. မဲနဲ့ရွေးရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကသာ တတ်နိုင်စွမ်းလို့ပါပဲ…။
(လက်နက်နဲ့တိုက်လည်း…သမိုင်းခြေရာတွေအရ.. နိုင်နိုင်တာမဟုတ်.. )
မဲအရေအတွက်များရင်.. ဒီချုပ်အမတ်တွေ.. လွှတ်တော်၂ရပ်မှာများမယ်…။
များရင်.. များတဲ့အမတ်တွေကနေ.. ဒုသမ္မတကို.. တင်ပေးခွင့်ရှိပါတယ်..။
အဲဒီလိုနဲ့တက်လာတဲ့ဒုသမ္မတ ၃ယောက်ကို… အမတ်တွေကပဲ(လူထုမဟုတ်) …ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့..သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ရမှာမို့.. ဒီချုပ်တင်တဲ့ဒုသမ္မတက… သမ္မတဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
သမ္မတဟာ.. အစိုးရကက်ဘိနက်ဖွဲ့ရမှာမို့… ၀န်ကြီးတွေဟာ.. သမ္မတကရွေးသူဖြစ်ပါလိ့်မ်မယ်…။
ဒါဆို.. တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအပေါ်တော်တော်လေး.. သက်ရောက်နိုင်ပါပြီ…။
ဒီချုပ်ဟာ.. ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲ.. သပိတ်မှောက်လို့.. မှားခဲ့ပြီးပြီ…။
၂၀၁၂ကျ.. အမှားပြင်ခဲ့ပေမယ့်…ရတဲ့ခုံ၃၀ကျော်လေးနဲ့.. အခုထိ.. နလံမထူနိုင်သေး…။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ.. ရွေးကောက်ပွဲကို ရှောင်တဲ့နည်းသုံးခဲ့သမို့.. သုံးခဲ့ကြလို့.. အခု ၂၀၁၅ဟာ.. အမှားပြင်ဆင်ချက်လုပ်နေရတဲ့အဆင့်သာလျှင်… ရှိပါသေးကြောင်း…။